लोकप्रिय हुँदै एउटी गायिका - चर्चामा - साप्ताहिक
लोकप्रिय हुँदै एउटी गायिका
असार ७, २०७४
‘खनी हो यामु ए कान्छा...’ गीत लोकप्रिय भएपछि गायिका तृष्णा गुरुङ नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चामा छिन् । उक्त गीतको अघिल्ला चार–पाँच शब्द गुरुङ भाषामा छ भने श्रोताहरूले गायिका गुरुङलाई ‘म पनि जान्छु हे माया’ गीतकी गायिकाका रूपमा समेत चिन्छन् । यो गीतमा गायिका गुरुङको स्वर मात्र होइन, शब्द तथा संगीत पनि उनकै छ । लोक–पप शैलीको उक्त भिडियोले युट्युबमा राम्रो दर्शक पाएको छ ।
करिब छ महिनाअघि गायिका गुरुङले आफ्नै युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको उक्त गीत हालसम्म झन्डै साढे ३ लाख पटक हेरिएको छ । त्यसअघि अघिल्लो वर्षको अक्टोबरमा उनले अपलोड गरेको ‘गाइने दाजै...’ भने युट्युबमा झन्डै साढे २० लाख पटक हेरिएको छ ।
आधा दशकअघि मात्र सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी गायिका गुरुङले यो अवधिमा थुप्रै गीत गाइसकेकी छिन् । तीमध्ये अधिकांश गीत श्रोताले मन पराएपछि उनी युवापुस्ताको ढुकढुकी बन्न सफल भएकी छिन् । संगीतको औपचारिक प्रशिक्षण बिना नै गायिका बनेकी गुरुङ पछिल्लो समय भने संगीतको प्रशिक्षणमा समेत सक्रिय छिन् । आफ्ना गीतमा गाउँले रहनसहनलाई फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने यी गायिकाको कलालाई श्रोताहरूले मौलिकताका आधारमा पनि मन पराएका हुन् ।
अहिले लाइभ कन्सर्टमा समेत उनको माग छ । हालसम्म हङकङ, कोरिया, बेलायत, कतार, यूएई आदि देश पुगेर आफ्ना गीत प्रस्तुत गरिसकेककी यी गायिका यतिबेला सांगीतिक कार्यक्रमकै लागि अष्ट्रेलिया पुगेकी छिन् । उनले नेपालका प्राय: सबै सहरमा पुगेर कन्सर्ट दिइसकेकी छिन् ।
हरेक कन्सर्टमा उनी आफ्ना आधा दर्जन लोकप्रिय गीत–संगीत प्रस्तुत गर्छिन् । ‘कन्सर्टमा भेराइटी दिने प्रयास गर्छु, गायिका गुरुङ भन्छिन्– ‘लाइभ कन्सर्टमा ब्याकअप ब्यान्डसहित सांगीतिक प्रस्तुती दिनुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ ।’ कन्सर्टमा उनी प्राय: खनी हो यामु ए कान्छा, गाइने दाजै, दैव जानोस्, तिमी र म आदि गीत प्रस्तुत गरिरहेकी छिन् ।
एक साताअघि अष्ट्रेलियाका चारवटा सहरमा सञ्चालन हुने कन्सर्टमा सहभागिता जनाउन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी गायिका गुरुङको अष्ट्रेलियामा भने यो पहिलो प्रस्तुति हो । करिब तीन साता लामो सांगीतिक भ्रमणमा उनले एडिलेड, मेलबर्न, ब्रिसबेन तथा सिड्नीका कन्सर्टमा प्रस्तुति दिनेछिन् ।
पहिलो पटक ‘खानी हो यामु ए कान्छा’ गीत सुन्नेहरूले गुरुङसमक्ष एउटा जिज्ञासा राख्छन्, यी शब्दको अर्थ के हो ? उनको जवाफ हुन्छ— ‘गुरुङ भाषामा ‘कता जना लागेको ए कान्छा’ भनेको हो ।’
युवापुस्ताले मन पराएकी यी गायिकाको एउटा छुट्टै विशेषता पनि छ । उनी प्राय: मौलिक ग्रामीण शैलीका गीत मात्र गाउँछिन् । आफूले गाउने गीतका शब्दहरूसमेत प्राय: उनी आफैं संकलन तथा रचना गर्ने प्रयास गर्छिन् । ‘गीतका शब्दहरूमा मेहनत गर्ने हो भने हरेक गीत लोकप्रिय हुन सक्छन्, गायिका गुरुङको तर्क छ– ‘आकर्षक शब्द भएपछि त्यसमा संगीत र स्वरको जादु छर्न सकियो भने स्रोताहरूको मनमा बस्न धेरै समय लाग्दैन ।’ त्यस्ता शब्दले गाउँदेखि सहरसम्मका युवाको मन जित्ने कुरा उनले बुझेकी छिन् । आफ्ना गीतका म्युजिक भिडियोहरूमा आफैं अभिनयसमेत गर्न रुचाउने यी गायिका संगीतको औपचारिक प्रशिक्षणपछि आफ्नो गायकीमा थप निखार आएको महसुस गर्दैछिन् । ‘मैले सुरु–सुरुमा संगीतको प्रशिक्षणबिना नै गीत गाएकी थिएँ, उनी भन्छिन्— ‘अनुभव र प्रशिक्षणबिना गाउँदा नै म श्रोताहरूको मन जित्न सफल भएँ । अब प्रशिक्षणपछि मैले गाउने गीतले प्रशंसकहरूको थप मन जित्ने कुरामा म ढुक्क छु ।’
प्रकाशित :असार ७, २०७४
निराजन र प्रविशाको बिस्तारै
युट्युबमा हिट तीज गीत
इन्दिरा जोशीलाई सरी भन्थें
वैशाखका चलचित्र : कुन कति चले ? जेष्ठ ९, २०७५
रातारात हिट अशोक जेष्ठ ३, २०७५
हिटको खोजीमा गायक रञ्जितकुमार चैत्र ९, २०७४
सांगीतिक यात्राको सिल्भर जुब्ली फाल्गुन २३, २०७४
र्‍याप ब्यान्ड डिमोर्चाको कमब्याक फाल्गुन १२, २०७४
चर्चामा छन् यी जोडी फाल्गुन २, २०७४
विदेश बसेर स्वदेश घन्काउँदै माघ १७, २०७४
दृष्टिविहीनका रुपमा चिनिँदा अपूर्ण लाग्दैन माघ ११, २०७४
वसन्तबाट ब्रेक पाउने भाग्यमानीहरू माघ ७, २०७४
आफ्नो भिडियोमा आफैं मंसिर २५, २०७४